RFM भनेको के हो? | Martech Zone परिवर्णी शब्द
Martech Zone » परिवर्णी शब्द » आर बाट सुरु हुने परिवर्णी शब्द	» RFM
RFM को संक्षिप्त रूप हो रिसेन्सी, फ्रिक्वेन्सी, मौद्रिक.
रिसेन्सी, फ्रिक्वेन्सी, र मौद्रिक मूल्य भनेको उनीहरूको खर्च व्यवहारको आधारमा सबैभन्दा मूल्यवान ग्राहकहरूको विश्लेषण र पहिचान गर्न प्रयोग गरिने मार्केटिङ मेट्रिक हो। RFM लाई ग्राहकको आजीवन मूल्य (CLV) छिटो र बढाएर खरिदहरू। यो पनि समान जनसांख्यिकीय वा फर्माग्राफिक विशेषताहरु संग आफ्नो आदर्श ग्राहक वा लक्षित ग्राहकहरु लाई राम्रो परिभाषित गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।